Ciyaartoyda isugu soo haray Fifa Ballon d’Or 2012 oo maanta lagu dhawaaqi doono. - Caasimada Online
Home Warar Ciyaartoyda isugu soo haray Fifa Ballon d’Or 2012 oo maanta lagu dhawaaqi...
Ciyaartoyda isugu soo haray Fifa Ballon d’Or 2012 oo maanta lagu dhawaaqi doono.
Ciyaartoyda 23ka ah ee isugu soo haray abaal marinta laacibka sanadka aduunka Fifa Ballon d’Or 2012 ayaa manta (Isniin) lagu dhawaaqi doonaa, waxaana lasoo sheegayaa in qaabka ay codeyntu u dhaceyso aan wax laga bedelin.
Waxaa soo baxaayey warar sheegaya in laga yabaa in sharciga codeynta abaal marintaan wax laga bedelo, iyadoo manta daaha laga qaadayo 23da ciyartoy ee sida rasmiga ah isgu soo haray abaal marintaan uu sedaxdii sano ee ugu dambeysay ku guuleysanaayey xidiga Barcelona Lionel Messi.
Majalada bixisa abaal marintaan France Football ayaa daaha ka qaaday in qaabka codeyta abaal marinta uu weli sidiisii yahay, waxaana mar kale codeyn doonaa weriyeyaal caalamka laga soo xulay tababarayaasha xulalka iyo Kabtanada.